Apple ID Kawaran hadaan ilaawno jawaabaha amniga? | Waxaan ka socdaa mac
Jordi Gimenez | | Mac App Store, Tababarada
Maxaa dhacaya haddii aan ilowno jawaabaha su'aalaha amniga Maxaa nagu kalifay inaan Apple dhigno bakhaarkiisa App-ka? Tan waxaa iweydiiyay qof aan is naqaanay dhawaa waana sababta aan u doonayo inaan dhamaantiin idinla wadaago xalka "dhibaatadan", maadaama habkaas aan ku ogaan doono sida loo dhaqmo hadii ay nagu dhacdo.
Dhawaanahan, Apple waxay bedeshay sidii aan awoodnay gala koontadayada iTunes (oo loo yaqaan Aqoonsiga) in wax laga beddelo, wax laga beddelo ama si fudud loogu daro cinwaan emayl cusub, isbeddelkan waxay ku dartay saddex "su'aalo nabadgelyo" si ay u awoodaan inay isbeddelladan sameeyaan, waana wax iska caadi ah inaad iska iloobi karto.
Ha welwelin, ma noqon doontid kan ugu horreeya ee kugu dhaca mana noqon doontid kan ugu dambeeya. Xaqiiqdii markaad isbeddelkan sameyneyso dhowr bilood ka hor, ma xasuusano jawaabaha aan bixinno su'aalaha guud ee la weydiiyay. Hagaag, hada waxaad dhihi doontaa, mala yaabo inaan xasuusto jawaabaha aan bixiyay midkoodna! Aan hubino:
Waxaan galnaa https://appleid.apple.com/ ama bogga taageerada ee Apple Store Online waxaan gujineynaa Maareynta Aqoonsigaaga Apple:
Marka cinwaanka emaylka iyo lambarka sirta ah ee kootadeena la geliyo, waxaan riixeynaa Password iyo Security:
Halkan waa halka uu na weydiinayo inaan ka jawaabno labo ka mid ah seddexdii su'aalood ee ay na weydiiyeen bilo ka hor, waa hagaag haddii aan jawaabaha garano dhib ma la kulmi doonno, laakiin ka warran haddii aynaan garanayn? Halkan waxaan ka heleynaa laba ikhtiyaar:
Haddii aad sameysatid koonto emayl dib-u-dejin ah, waxaad ikhtiyaar ku yeelan doontaa xagga hoose
Toos ugu wac Apple ama la xiriir kan adeeggadesdesk
Labadan ikhtiyaar midkoodna, annaga si dhakhso leh ayuu u xallin doonaa dhibaatada. Haddii aad ku xirto koontadaada iimaylka soo-kabashada, waad badbaadin doontaa wicitaanka (in kasta oo ay lacag la’aan tahay) waadna xallin kartaa si dhakhso leh, laakiin haddii ikhtiyaarkaagu yahay inaad wacdo Apple maxaa yeelay adigu ma aadan habayn emaylka soo-kabashada, ma sameyn doonaan Dhibaato kasta ha kuu dhigto Ka dib markii aad dhawr talaabo oo fudud la talinta dhinaca kale ee taleefanka, goor dhaw ayaad dhibaatada xallin doontaa.
Macluumaad dheeraad ah - IMac-kii ugu horreeyay “Waa la cusboonaysiiyay” Dukaanka Mareykanka
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Aqoonsiga Apple, ka waran haddii aan ilaawno jawaabaha amniga?
iyo haddii aanan helin ikhtiyaarka ah inaan dib-u-beddelo laakiin haddii aan haysto cinwaan emayl dib-u-dhisid ???
Ku jawaab opapp
Ikhtiyaarkaasi wuxuu ku jiraa lambarka sirta iyo amniga. Raac casharrada ay tahay inaad ka tagto.
Waad soo wici kartaa markasta si mar labaad laguugu soo diro emaylka. Miyaad fiirisay spam iyo wixii aan ahayn?
Ma helayo ikhtiyaarka ah inaan dib-u-dejiyo inkasta oo aan raaco dhammaan tallaabooyinka casharka oo aan haysto emaylkii labaad
Ku jawaab ann
Weli waa la yaab in ikhtiyaarka ann uusan soo bixin, iskuday inaad wacdo Apple waana hubaa inay daqiiqad ku xallin doonaan.
Ma noo sheegi kartaa waxa la sameeyo adigoon wicin tufaax?
Jawaab si Luis Pantoja
oo ma noo sheegi kartaa waxa la sameeyo adigoon wicin tufaax? markii aanan haysan emaylkan dib-u-dejinta ah?
Hagaag waan ka xumahay Luis, laakiin ma aqaan qaab kale oo aan ku sameeyo.
Waad salaaman tihiin, magaceygu ​​waa Santiago waxaan ku noolahay Peru, isku dhibaato ayaan qabaa isla markaana waxaan isku dayay inaan la xiriiro adeegaha farsamada ee Apple waxayna ii sheegeen in adeegaas aan la heli karin, fadlan hadaad sameysan karto Apple wuu sameyn karaa Adiga ayaa wacaya waxaanan ku siinayaa macluumaadkeyga oo dhameystiran, kaliya si aan uga soo helo jawaabaha 3-da su'aalood ee amniga Apple, gunno ahaan waxaan ku siin doonaa album horay loogu iibsaday itunes Store «Jose jose - In good waqtiyada iyo kuwa xunba ", waxaan rajaynayaa jawaabtaada, mahadsanid.
Ma lihi emayl soo-kabasho ah mana xasuusto mid ka mid ah jawaabihii.
Waan hubiyey bogga tufaaxa (Mexico) laakiin waxaa jira dhowr lambar taleefan
Mana garanayo midka aan wacayo
Telefoonada midkood ma shaqeeyaa mise mid gaar ah ayaa jira oo noocan ah dhibaatada jirta?
Hi Max, mabda 'ahaan waa inaad wacdaa qofkasta oo taageersan laakiin haddii midkoodna xor yahay, isku day midkaas. Isbaanishka 900 ka waa kuwa xorta ah, anigu garan maayo waxay ku sugan yihiin Mexico
Waxaan qabaa su'aal, dhibaatadaydu waxay tahay inaan beddelo lambarkayga sirta ah, laakiin waxay ila tahay inaan khalad qortay oo aanan mar dambe marin karin koontadayda, laakiin sidoo kale ma xasuusto su'aalaha amniga ee aan weydiin karo
Kawaran haddii waddankayga, oo ah Costa Rica, aysan jirin meel laga waco, ma garanayo halka ay lambarku ku yaalliin ama waa maxay ????
Haye, taas uma helin inaan beddelo jawaabaha sida jira maxaa jira? Caawin dhakhso leh fadlan
Miyaad raacday talaabooyinka casharka? Waxaad ka soo gashay halkan: https://appleid.apple.com/
Waan ka xumahay dhibaatada, laakiin waxaan gaadhay xadka dulqaadkayga waxaanan doonayaa inaan laptopkayga ka tuuro daaqada.
Waad aragtay, waxaan isku dayay in ka badan shan saacadood inaan xasuusto jawaabaha, laakiin si fudud ayaan ku illaaway. Wicitaanka Taageerada Farsamada maahan ikhtiyaar maxaa yeelay taleefanka gurigeygu ma shaqeynin muddo labo toddobaad ah ka soo wicitaanka wax shaqsiyadeed sida taleefankayga gacanta uma muuqdo. Marka waxaan isku dayayaa inaan u xaliyo dhibaatada siyaabo kale, waxaan dib u aqriyay talooyinka Taakuleynta Farsamada ay ku siiso boggooda tufaaxa, laakiin halkaas ayay igu dhaafaysaa. Waxa iyaga iyo nidaamkaagu ku heshiiyeen waa inaan u baahanahay emayl samatabbixin ah, laakiin ma garanayo sida loogu daro akoonka. Waxaan isku dayay inaan ku daro "emayl kale", laakiin waxaan ka shakisanahay inay tani la mid tahay ta badbaadinta sidaa darteedna aanan haysan ikhtiyaar aan wax kaga beddelo su'aalaha / jawaabaha amniga ee adiga kuu muuqda.
Marka waxaan kaa codsanayaa inaad i caawiso, sidee baan ugu daraa e-maylka kor ku xusan ee kor ku xusan? Ma la mid tahay ka beddelka? Erayadu ma sharxi doonaan inta aad i caawinaysid haddii aad ka jawaabto su'aalahaas. Salaan.
Jawaab Karen Gtz
Dariiqa kaliya ayaa ah adigoo wacaya taageero farsamo ka dib markaad ka jawaabto dhamaan macluumaadka shaqsiyeed ee ay weydiistaan, dib ayey u furayaan eraygaaga sirta ah waxaadna ku dari kartaa cinwaanka emaylka munaasabadaha mustaqbalka.
Nasiib darrose, iimaylku iima soo gaadho sida ay ugu muuqato inaanu soo wicin 🙁
dhibaatadaydu waxay tahay in waraaqdayda samatabbixintu aysan sii shaqeynaynin mana geli karo boostada si ay xalka ii siiso
Ku jawaab chinodwdrums
Chinodwdrums wanaagsan, waxaan u maleynayaa in xalkaagu yahay inaad wacdo Apple una sheegto dhibaatada.
Waad salaaman tahay, ka waran AD-kaygu wuxuu ka imid Mexico iyo Peru halka aan ku noolahay imika, waxaan iibsaday iphone oo waxaan ilaaway jawaabihii oo waan waydiiyay maxaa yeelay waxay ahayd iibkaygii ugu horeeyay ee qalabkan, waxay rabaan inay calaamadeeyaan dhibaatada meesha taala ma laha calaamad waxayna xulashada Peru kaliya sheegaysaa inay la xiriireyso wadaha AYUDA POR FIS: '(
Adris wanaagsan, dariiqa kaliya ee ay tahay inaad laxiriirto Apple ama aado dukaanka aad ka iibsatay qalabka oo ay ku fuliyaan maamulka. Ma isku dayday inaad ku sameyso khadka tooska ah? http://www.apple.com/support/country/
Salaan Waxaan ku abuuray akoon cusub hotmail si aan u abuuro aqoonsi cusub oo aan ku galo dukaan kale laakiin ma xasuusto waxa emaylka ugu weyni ahaa iyo jawaabaha su'aalaha midkoodna. Kaliya waxaan hayaa emaylka soo-kabashada. Laakiin ma aqaano waxa aan ku sameeyo taas, maxaa yeelay haddii aan galo App Store oo aan la socdo Boostada dib u soo kabashada, waxay igu abuureysaa aqoonsi kale oo cusub waxaanan u baahanahay inaan galo midka aan ilaaway! Ma ogtahay waxa aan sameyn karo?
Ku jawaab Jacqueline
Halg Jacqueline, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa e-maylku u ahaa aqoonsiga cusub ee Hotmail. Haddii aadan xusuusan e-maylkaas muhiimka ah, emaylka soo-kabashada ayaa ah mid aan waxtar lahayn.
Salaan kadib, boostada wanaagsan. Waxaan qabaa su'aal, suurta gal ma tahay in la beddelo emaylka keydka ah si dib loogu celiyo lambarka sirta ah? Salaan.
Josue wanaagsan waadna ku mahadsan tahay akhriska, haa, haddii ay suurtagal tahay in wax laga beddelo emaylkaas adoo ka helaya Aqoonsigaaga Apple ka xulashada 'Maaree koontada'
Dhibaato ayaa i haysata, ma xasuusto su'aalahayga amniga, waxaan u diray boostada marar badan waxna weligay ma soo gaadhin mana helin fursad aan ku soo waco ama lambarrada taleefannada. Caawi fadlan😭😭😭😭😭😭 salaan !!
Ku jawaab Ciria
Hi Ciria, ma eegtay spam-ka koontadaas? waxaad ka heli doontaa taleefanka tufaaxa halkan http://www.apple.com/support/country/ iyadoo kuxiran dalka aad ku nooshahay.
Waa salaaman tahay Jordi Gimenez.Waxaan qabaa su'aal, maxaa dhacaya haddii aan rabo inaan soo celiyo koontada 'icloud' laakiin ku jirta koonto aan ahayn id apple?
Nabadeey Juan Pablo, ma hubo sababta aanan waligey sidaas u sameynin laakiin waxaan u maleynayaa in aqoonsi kasta oo Apple ahi uu ku xiran yahay koontada iCloud, sidaa darteed malaha inaadan awoodin.
Iga raali noqo, laakiin ka waran hadaan ku jiro kaniiniga oo aysan waxba ka soo muuqan qodobka ugu horeeya ee aad na siisay, "maaraynta" ma muuqato waxaanan runtii rabaa inaan soo dejiyo ciyaar, fadlan, haddii aad i siin lahayd lambarka Aqoonsiga Apple ee caawi si ay aniga ii caawin karaan ama haddii aad hayso fikrad kale ??? Mahadsanid waxaan rajaynayaa inaad i caawiso
Waxaad i siin laheyd farxad weyn hadaad i caawiso
Haye Caalin, waxaan fahamsanahay inaad ka tijaabineyso kiniin? Casharkaan waxaa laga sameeyay kombiyuutarka, taleefannada Apple waa: http://support.apple.com/kb/HE57?viewlocale=es_ES
Aad baad u mahadsantahay mahadsanid mahadsanid
SALAAN EMAILKEYGA OO QALAD AH WAAN SOO QORAY MARKII AAN RABO INAAN SAMEEYO WHATSAP .. OO AY I waydiisanayaan inaan xaqiijiyo si aan awood ugu yeesho inaan galo .. MAXAAN SAMEEYAA
Jawaab JOSE OSOIRO
Waad salaaman tahay, waxaan ka imid Peru waxaanan qabaa dhibaato isku mid ah, waxay dhacdaa inay tahay wax iibsigeygii ugu horeeyay waxayna i weydiiyaan su'aalo amniga la xiriira laakiin ma xasuusto oo waxaan horeyba isugu dayay inaan dib u dhiso, waxaan helay ikhtiyaar laakiin waxba yimaado ama spam, maxaan sameyn karaa?
Maalmo ka hor ayaa la xaday aqoonsigeyga Apple waana muhiimad weyn aniga aniga sidaan ugu hadlo si shaqsi ah ama waxaan wacaa taageero farsamo halkan Venezuela ma jiraan tirooyin aan u maleynayo sida aan sameeyo waxaan filayaa jawaab degdeg ah
Jawaab Julio Bolaños
Q TQL, HEY HADII AAD II CAAWIN KARTO ID-kAYGAYGU WUXUU XIRAN YAHAY, MA GELI KARO FURSADO IYO NABAD GALIN WAAYO MA I SIINAYO XULASHADA, WUXUU I SHEEGAA QAQOONSIGAYGA WUXUU XIRAN YAHAY, WAAN SOO CELIN DOONAA PASSWORD HADAAN SAMEEYO AQOONSIGA MA IGU SIINAYO XULASHADA. MA HELI KARO MAIL OO HADDII AAD U BAXDO AMNIGA JAWAABTAYA AYAY II SHEEGTAA IN AANAY MACLUUMAADKU ISKU SHAQAYN
CERVIDOR, MAXAAN SAMAYN KARAA?
Jawaab CHAVA DURAN
Laga soo bilaabo Peru maxay tahay lambarka la wacayo? Sababtoo ah anigu ma helayo ikhtiyaarka dib-u-dejinta sidoo kale
Jordi, xalkaagu waa inaad wacdo Aplle
Ku jawaab mjggcroccod
Muhiim ma aha in la caayo, markaa waan faalleeyaa faallada
Waxaan helayaa ikhtiyaar ah "ku dar waraaqaha soo-kabashada" Waxaan doortaa ikhtiyaarka waxna ma dhacaan.
Waad salaaman tihiin, waan hilmaamay su'aalaha amniga oo ikhtiyaarka dib udajinta ma muuqato, maxaan sameeyaa sidoo kale waxaan lumiyay erayga sirta ah ee emaylka soo kabashada
Waxa kaliya ee aan ka fikiri karo ayaa ah inaad wacdid Apple maadama aan lahayn e-mayl soo kabasho way adkaan doontaa.
Markii aan dib u dejinayo su'aalaha, waxaan ogaadaa inaysan hayn macluumaad ku filan oo ay dib ugu dejin karaan, maxaa sababay taasi? waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga, salaan.
Ku jawaab Roberto M
Subax wanaagsan waxaan ka qoraa Ecuador Waxaan u baahanahay inaan ogaado haddii aad i caawin karto iyo in kale. Waxaan hayaa iPhone 6 oo leh codkayga laakiin maalin maalmaha ka mid ah markii ay i weydiisay erayga sirta ah waxaan galiyay ilaa seddex jeer mana qabanin maxaa yeelay calaamadda Wi-Fi way kala go'day waxayna xannibtay nabadgelyo ku qor lambarkayga sirta ah waxaan aadaa su'aalaha amniga laakiin si sax ah uma xasuusto mana garanayo waxa aan sameyn karo. Intaas waxaa sii dheer, emaylka koontadaas waa mid duug ah waxaana loo xannibay sababo ammaan awgood waligey dib looma dhisin
Sida loo waafajiyo qalabka macruufka ee 'Wifi-Sync', Mac-keena